love - ဝိက်ရှေန်နရဳ
ဗဵုဝေါဟာဏအ်: Love, lové, lóve, løve, lóvé, ကဵု лове
၁.၇ နိရုတ် ၂
၉ ဒတ်ချ် (ဒေါဝ်)
၁၀ အင်္ဂလိက် (ဒေါဝ်)
(ဗီုပတိတ်ရမျာင်ဒုင်တဲမာန်, အမေရိကာန်နာနာသာ်) IPA(key): /lʌv/, [ɫʌv]
Audio (RP) (ဝှာင်)
Audio (GA) (ဝှာင်)
(အင်္ဂလာန်လ္ပာ်သၟဝ်ကျာ, Ireland) IPA(key): /lʊv/
နူ အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် love, luve၊ နူ အင်္ဂလိက်တြေံ lufu, from ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *lubō၊ နူ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *lewbʰ- (“love, care, desire”)။
The verb is from အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် loven, lovien, from အင်္ဂလိက်တြေံ lufian (“to love”), from the noun lufu (“love”), see above.
Eclipsed non-native အင်္ဂလိက် amour (“love”), borrowed from ပြင်သေတ် amour (“love”).
Primates need love
"I love not that underlings should perceive my wisdom."
၂၀၁၃ ဂျောန် ၂၁, Oliver Burkeman, “The tao of tech”, in The Guardian Weekly , volume 189, number 2, page 27:
The dirty secret of the internet is that all this distraction and interruption is immensely profitable. Web companies like to boast about […] offering services that let you […] "share the things you love with the world" and so on. But the real way to buildasuccessful online business is to be better than your rivals at undermining people's control of their own attention.
From အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် loven, lovien, from အင်္ဂလိက်တြေံ lofian (“to praise, exalt, appraise, value”), from ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *lubōną (“to praise, vow”), from *lubą (“praise”), from အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ *lewbʰ- (“to like, love, desire”), *lewbʰ-.
love (ပူဂဵုတတိယကိုန်ဨကဝုစ်ပစ္စုပ္ပန်ဗီုဓမ္မတာ loves, ပစ္စုပ္ပန်လုပ်ကၠောန်စွံလဝ် loving, အတိတ်ဗီုဓမ္မတာကဵုအတိတ်လုပ်ကၠောန်စွံလဝ် loved)
Said by some to be from the idea that when one doesathing “for love”, that is for no monetary gain, the word “love” implies "nothing". The previously held belief that it originated from the ပြင်သေတ် term l’œuf (“the egg”), due to its shape, is no longer widely accepted, though compare the use of duck (reputed to be short for duck's egg) forazero score at cricket.
Hebrew: אפס‏‎ (he) m (éfes)
Macedonian: нула (mk)f(nula)
Cyrillic: ну̏ла f
Latin: nȕla (sh) f
Tamil: காதல் (ta) (kātal), அன்பு (ta) (aṉpu)
မန်: ဆာန် (mnw) (chān), မေတ္တာဆာန် (mnw) (mettāchān)
မြန်မာ: ချစ် (my) (hkyac), ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (my) (hkyachkrang:metta)
ไทย: รัก (th) (rák), ความรัก (th)
ဝေါဟာနူ ရဝ်မာနဳ love.
vocative ဧကဝုစ်နူဝေါဟာ lov
နူ ဂျာမာန်အဒေါဝ်မသဝ် lōve, from ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *galaubô, cognate with ဂျာမာန် Glaube.
နာမ် နဳနိုတ်တြေံ lofa, နူ ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ *(ga)lubōną, cognate with သွဳဒေန် lova (“to promise; to praise”), ဂျာမာန် loben (“to praise”), geloben (“to vow”), ဒါတ် loven (“to praise”).
ပူဂဵုပဋ္ဌမ /ပူဂဵုတတိယ ဧကဝုစ် ပစ္စုပ္ပန် သ္ပစၞောန်ထ္ၜး/subjunctive
ပူဂဵုဒုတိယ ဧကဝုစ် imperative
နူ လပ်တေန် lupa, feminine of lupus. Compare ဝေနေတ် lova, ပြင်သေတ် louve.
dative ဧကဝုစ်နူဝေါဟာ lof
နူ အင်္ဂလိက်တြေံ lufu
သကတ်: luve, lufe
→ ပြင်သေတ်: lové
→ ဟာန်ဂါရေဝ်: lóvé
→ ရဝ်မေနဳယျာ: lovea
→ ရုရှာ: лавэ́ (lavɛ́)
→ သကတ်: lowie
→ သလဝ်ဝေန်နဳယျာ: lóve
ပူဂဵုတတိယ ကိုန်ဗဟုဝစ် ပစ္စုပ္ပန်နူဝေါဟာ loviti
ကလေင်သီကေတ်လဝ် နူ "https://mnw.wiktionary.org/w/index.php?title=love&oldid=6372"
အင်္ဂလိက် ဝေါဟာရ မကၠုင် နူ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ
အင်္ဂလိက် ဝေါဟာရ မစေန်ဆက်ကၠုင် နူ အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ root *lewbʰ- (love)
အင်္ဂလိက် terms with quotations
အင်္ဂလိက် terms with obsolete senses
Terms with manual transliterations different from the automated ones/he
ဝေါဟာချက်ခ်လွဳလဝ် နူဝေါဟာ ရဝ်မာနဳဂမၠိုင်
ဒိန်နေတ် terms with obsolete senses
အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် terms derived from ဂျာမာန်နေတ်လက္ကရဴ-အခိုက်ကၞာ
အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် terms inherited from ဂျာမာန်နေတ်လက္ကရဴ-အခိုက်ကၞာ
အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် terms derived from ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ
အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် terms inherited from ဂျာမာန်-အခိုက်ကၞာ
အင်္ဂလိက် အဒေါဝ် terms derived from အိန်ဒဝ်-ယူရဝ်ပဳယာန်-အခိုက်ကၞာ
နာမ် အင်္ဂလိက် အဒေါဝ်
နိရုတ် နဝ်ဝေ ဗော်ခ်မဝ်
ကြိယာ နဝ်ဝေ ဗော်ခ်မဝ်
ကြိယာ နဝ်ဝေ နဳနိုတ်
နာမ် နဝ်ဝေ နဳနိုတ်
မုက်လိက်ဏအ် လက္ကရဴအိုတ် ပလေဝ်ဒါန်လဝ် ပ္ဍဲ ၃၀ ဨပြဳ ၂၀၂၁ ပ္ဍဲ ၁၉:၀၄